Hery Rajaonarimampianina : “Rariny raha hampiana ny tanora” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Rariny raha hampiana ny tanora”
Ankoatra ny asa fampandrosoana ara-toekarena tanterahin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, dia tsy nohadinoiny ihany koa ny mahakasika ny tanora sy ny fanatanjahantena. Rariny raha ampiana ny tanora satria izy ireny no tompon’ny ankehitriny, hoy ny Filoha.
Porofo mivaingana amin’izany ny fananganana fotodrafitrasa ara-panatanjahantena, izay tafiditra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena, toa ny any Antsirabe, izay efa an-dalam-panamboarana. Teo ihany koa ny kianja filalaovam-baolina manara-penitra, ny ivon-toeram-piofanana ho an’ny tanora eo amin’ny tontolon’ny baolina lavalava, sns. Tsy diso anjara ihany koa anefa ny teo amin’ny taranja hafa, toa ny basikety, izay misy fifaninanana ahiahiany nampitondraina ny anarana “Coupe du Président”, izay mizotra sy tanterahina isan-taona.
Marihina fa hetsika natao indrindra hampiraisana ireo tanora manerana an’i Madagasikara ny “Coupe du Président” eo amin’ny taranja basikety, satria mifanintsana sy mifampikasoka amin’ity hetsika ity avokoa ireo tanora avy amin’ny Faritra 22 eto Madagasikara.
Nanambara mantsy ny Filoham-pirenena fa tafiditra amin’ny vina « Fisandratana 2030 » ny fikarakarana sy fitsinjovana ny tanora, tsy amin’ny alalan’ny fanatanjahantena ihany fa amin’ny alalan’ny fampananan’asa sy fampiofanana arak’asa, sns. Izany indrindra no anisan’ny ifotoran’ny Fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao, raha ny nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, satria maro ireo vina ho fampandrosoana ny tanora amina faritra maro manerana ny Nosy. Tafiditra indrindra amin’ny “Fisandratan’ny tanora” izany rehetra, raha ny voalaza hatrany.
Na izany aza, nanipy hafatra ho an’ny vahoaka ny Filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny tokony hikajiana sy hikoloana ireny fotodrafitrasa isan-tsokajiny ireny mba ho lovain-jafy. Voalaza ihany koa fa ho maro ireo fotodrafitrasa hatsangana any amin’ny faritra.